Yaraanta soo-bandhigga yar-yar ayaa saameyn ku yeeshay soo-saarista 14 "iyo 16" MacBook Pros | Waxaan ka imid Mac
Yaraanta shaashadaha yar-yar ee loo yaqaan 'LED-yada yar yar' ayaa saameyn ku yeeshay soo saarista 14 iyo 16 ″ MacBook Pros
Intii lagu guda jiray WWDC-dii ugu dambeysay waxaa la filayay in Apple ay soo saari doonto qalab qaab ah Mac gaar ahaan MacBook Pro oo leh cabbirro 14 iyo 16-inji ah siday u kala horreeyaan. MacBook-kan cusub ee leh dib-u-habeynta iyo shaashadda yar-yar ee loo yaqaan 'LED-screen' ayaa loo maleynayay inuu ku imaan doono iyadoo loo eegayo wararkii ugu dambeeyay ee isla Muddooyinka ama maalmo ka dib laakiin wax walba waxay umuuqdaan inay dib uga dhacayaan waxyar sidii la filayay.
Shalay uun barta caanka ah ee DigiTimes waxay muujisay qayb yar oo ka mid ah warbixinta gudaha ee shirkadda oo sharraxaysa cadaadiska saaran shixnadaha ee MacBook Pro intii lagu guda jiray rubucii saddexaad ee sanadkan.
Waxay u muuqataa in yaraanta qaybaha iyo gaar ahaan shaashadda mini-LED-ka ay si xun u saameynayaan wax soo saarka ballaaran ee qalabkan. Mark Gurman laftiisu, wuxuu sharaxay maalmo kahor inuusan arkin daah furis kahor xagaaga kooxahan. Waqtigan xaadirka ah Gurman wuxuu ku adkeysanayaa in kooxahan dhawaan la abuuri karo laakiin ma cayimayso taariikh cayiman midkoodna.
Faahfaahin kale oo ka mid ah kuwan cusub ee 14 iyo 16-inch ee MacBook Pro siday u kala horreeyaan ayaa ah isbedelka ama hagaajinta processor-ka, suurtagal ahaan in processor-yada kooxahani ay xoogaa ka xoog badnaan doonaan kuwa moodooyinka hadda jira, oo ah M1 horumar leh. Waxaas oo dhami wali waa warar xan ah ka dib warar xan ah mana jiraan wax si rasmi ah loo xaqiijiyey sidaa darteed uma baahnin inaan ka fikirno inay dhowaan imaanayaan maaddaama aysan jirin xog muhiim ah oo tilmaamaysa, taas beddelkeedana ay tahay wax iska soo horjeedda. Waan arki doonaa waxa ugu dambeyn dhacaya iyo goorta la soo bandhigo Mac-yada cusub.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Yaraanta shaashadaha yar-yar ee loo yaqaan 'LED-yada yar yar' ayaa saameyn ku yeeshay soo saarista 14 iyo 16 ″ MacBook Pros
Diiwaangelinta Apple Podcasts waxay bilaabmaysaa Juun 15